विभिन्न घटनाहरुमा संलग्न ८ आरोपित सार्वजनिक | चितवन पोष्ट दैनिक
विभिन्न घटनाहरुमा संलग्न ८ आरोपित सार्वजनिक
२०७० पुष १२, शुक्रबार ०३:१० गते
केरवानीका एकराजलाई घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलासा [divider]
बुटवल । विभिन्न घटनाहरुमा संलग्न विभिन्न ८ जना आरोपितलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा अभियोगका ६ जना, चोरी मुद्दा अभियोगका १ जना तथा जवर्जस्ती करणी अभियोगमा १ जना गरी ८ जनालाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले रूपन्देहीको केरवानी वडा नं ८ सिराहा भन्ने स्थानमा रहेको देवदह फलोसिप फाउण्डेसन सुधार केन्द्रमा राखिएका एकराज पौडेलको हत्यामा संलग्न पाँचै जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रहरीले रूपन्देही देवदह २ बस्ने २१ वर्षीय संदिप श्रेष्ठ, सोही गाविस वडा नंं ५ का २४ वर्षीय अमृत अर्याल, नवलपरासी स्वाठी ६ का २४ वर्षीय विशाल क्षेत्री, सोही गाविस वडा नं. ५ का २५ वर्षीय विनोद पुन र सोही गाविस जमुनिया १ बस्ने ३१ वर्षीय ज्योतिराज सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
सञ्चालकमध्येका संदिप श्रेष्ठ पौडेललाई रसीले घाँटी थिचेर हत्या गरेको बताएको छ । मादकपदार्थ तथा लागूऔषध सेवन गर्ने गरेका उनलाई अभिभावकले लागूऔषधको कुलत छुटाउन सुधार केन्द्रमा राखेका थिए । २३ वर्षीय पौडेलको सुधाकरा नाममा दिएको यातनापछि मंसिर १९ गते मृत्यु भएको थियो । पक्राउ परेका उनीहरुलाई कर्तव्य ज्यान अभियोगमा मुद्दा चलाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी राजकुमार वैदवारले जानकारी दिए । सुधार गृहका पाँच जना सञ्चालकमध्ये तीन जना पक्राउ परे पनि अन्य दुई जनालाई प्रहरीले करिब १ महिनापछि मात्र पक्रन सफल भएको हो । प्रहरीले अन्य दुई जनालाई खैरनी र नवलपरासीको जमुनियाबाट पक्राउ गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै दाङ सिसहनिया १ बस्ने ४० वर्षीय शेरबहादुर परियारलाई दाउराले हानी हत्या गर्ने स्याङजा बालिङ नगरपालिका ४ स्थायी घर भई बुटवल १५ मा बस्ने झलक भनिने ३३ वर्षीय बालकृष्ण दर्जीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
यसैगरी प्रहरीले विभिन्न स्थानमा चोरी तथा डकैती गर्ने एक जनालाई सार्वजनिक गरेको छ । यस आसपासको क्षेत्रहरुमा सुनचाँदी पसलहरु चोरी गर्ने रूपन्देही सिद्धार्थ वडा नं. ७ बस्ने ३३ वर्षीय पप्पुप्रसाद शाह भनिने पप्पुप्रसाद जयसवाललाई प्रक्राउ गरेको हो । उनीहरु असार १२ गते बुटवल १५ मा आपसी विवाद गरी झलकले दाउराले हानी फरार भएकोमा शेरबहादुरको उपचारको क्रममा असार १४ गते भरतपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको थियो । घाइते बनाएपछि दर्जी फरार भएका थिए ।
जयसवालले साउन ६ गते राति करेवानी गाविसको वडा नं. ३ मा रहेको पर्वत महेश्वर सुनचाँदी पसलको सेफको लक तोडी करिव ४३ लाख १० हजार ४ सय १४ रुपैया बराबरको सुनचाँदीका गहना चोरी गरेको खुलेको छ ।
यसैगरी ०६६ साल जेठ ५ गते राति बुटवल ८ मा रहेको रेसुङगा सुनचाँदी पसलको सेफलक तोडी करिव ६९ लाख २२ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ बराबरको चोरीमा पनि जयसवालको संलग्न रहेको बताइएको छ । उनीसँगै सुनचाँदी पसलमा फरार अन्य अभियुक्तहरुको खोजी कार्य भइरहेको बैदवारले जानकारी दिए ।
यसैगरी जबरजस्ती करणी मृद्दाका एक अभियुक्तलाई प्रहरीले बिहीबार नै सार्वजनिक गरेको छ । बुटवल १० खुख्खानगरकी १५ वर्षीय दीपक राना
(नामपरिर्वन) लाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले उदयपुर पैसरा ८ का २८ वर्षीय दीपक रानालाई पक्राउ गरेको हो । रानाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी बैदवारले जानकारी दिए ।
भरतपुर, ३१ वैशाख । भरतपुर अस्पताललाई कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न सहयोग मिलोस् भनेर अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ ।...